Su'aalaha La Weydiiyo - AnHui Gaoge Qalabka Sirdoonka Co., Ltd.
Goorma ayey tahay dhalmada ama waqtiga hogaamintu?
Waxay kuxirantahay amarkaaga, khadadka wax soosaarka oo dhan sida bacda hadday dhacdo xirxirida, bacda xirxirida bacda, caadiyan waa 45-60 maalmood. Qalabka keli ah sida mashiinada baakadaha ee VFFS, mashiinada baakadaha ee horay loo sameeyay, makiinadaha bacda lagu furo, sida caadiga ah waa 30-45 maalmood. Xilliga ugu sarreeya, waxay sidoo kale leedahay wax ku saabsan jadwalka wax soo saarkeena.
Ma jirtaa tiro ugu yar oo amar lagu bixiyo?
Haa, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad iibsato 1 nooc oo mashiinno ah sida ugu yar ee ay ugu kala amar badan yihiin. Sida 1 set oo ah mashiinka baakadaha ee VFFS, 1 set oo ah mashiinka baakadaha kiishka ee horay loo sameeyey, 1 set oo ah mashiinka bacda lagu furo ee furan.
Sidee ku saabsan habka lacag bixinta?
Waxaan aqbalnaa TT, 50% TT oo ah lacag bixin hore iyo 50% TT oo ah bixinta dheelitirka kahor rarka.
Waa sidee qaabka loo geeyo
Mashiinnada waxaa lagu soo diri karaa badda ama hawada, waxaan ku siin karnaa FOB, CNF, CIF ereyga iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha. Xajmiga weyn ee mashiinka sida mashiinka afka lagu rito ee furan, waxaan doorbidi lahayn inaan ku soo dirno badda.
Ka warran xirxirida rarka?
Waxaan isticmaaleynaa alaabada wax lagu raro ee dhoofinta. Yurub iyo Ustaraaliya, waxaan u adeegsaneynaa kiiska alwaaxda fumigated. Waqooyiga Ameerika, Koonfurta Ameerika iyo Afrika, waxaan adeegsaneynaa kiish alwaax ah oo alwaax ah ama alwaax fumigated ah. Aasiya, waxaan isticmaaleynaa kiish alwaax ah ama kiish alwaax ah oo saddex-gees ah.
Waa maxay shuruudaha korontada?
Guud ahaan marka la hadlayo, waxaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha midkoodna 220v 1phase ama 110v 1phase ama 380v 3phase ama 220v 3phase, iwm.
Ayaa rakibi doona qalabka?
Qalabka kaliya sida mashiinka baakadaha VFFS, mashiinka baakadaha horay loo sameeyay, mashiinka bacda afka furan, guud ahaan waxaan bixin doonaa buuga gacanta iyo fiidiyowyo si aan uga caawinno macaamilka inuu rakibo qalabka. Khadadka baakadka oo dhan sida bacda haddii kiiska la xirxirayo, bacda bacda lagu xirxirayo, waxaan u diri doonnaa farsamayaqaan si uu uga caawiyo warshadda macaamiisha, iibsaduhu wuxuu u baahan yahay oo keliya inuu bixiyo tikidhka duulimaadka socdaalka, cuntada, kharashka hoyga iyo kaalmada maalinlaha ah.
Waxaan ku siin doonaa taageero dayactir ah arrin kasta oo ku saabsan qalabka. Haddii qalabku wali ku jiro dammaanad, waxaan beddeli doonnaa oo aan dayactiri doonnaa qaybaha cilladdu bilaash tahay oo iibsaduhu wuxuu u baahan doonaa oo keliya inuu bixiyo kharashka dhoofinta ama hawada. Guud ahaan, waxaan awoodnaa inaan rarno qaybta cilladaysan ee ku jirta kaydka 1 maalmood gudahood.
Mashiinka Bacaha Af-furan Su'aalaha la Weydiiyo --- Maxay yihiin alaabooyinka ay soo qaadan karto?
Mashiinkaan waxaa loo isticmaalaa xirxirida miraha, quudinta, xabadaha, qashinka bisadaha, sibidhka, kiimikada, dhuxusha, bacriminta, jajabka, cuntada PET, bariiska, ciidda, jajabka iwm.
Mashiinka Boorsada-Furan Su'aalaha la Weydiiyo --- Waa goorma keenista ama waqtiga hoggaanka?
Waqtiga hogaamintu waa 60 maalmood.
Mashiinka Bacda-Furan ee Su'aalaha la Weydiiyo --- Waa maxay nooca baakadka bacda ee loogu talagalay mashiinka baakadaha kiishka ee horay loo sameeyay?
gussets, boorsada barkin caadi ah ama baloog hoose / iskutallaab hoose, leh ama aan lahayn gacanta. bacda PE, bacda leh tolmo wanaagsan, bacda PP, bacda warqadda
Mashiinka Bacda-Furan ee Su'aalaha La Weydiiyo --- Waa maxay mugga wax lagu duubo?
Mashiinka Boorsada-Furan ee Su'aalaha La Weydiiyo --- Waa maxay xawaaraha xirxirayaashu?
Sida laga soo xigtay alaabooyin kala duwan, xawaaraha baakadu waxay noqon kartaa 8-12 jawaano / min.
Mashiinka Bacda-Furan ee Su'aalaha La Weydiiyo --- Miyuu jiraa tirada ugu yar ee lagu dalban karo amar?
Haa, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad iibsato 1 nooc oo mashiinno ah sida ugu yar ee ay ugu kala amar badan yihiin.
Mashiinka Bacda-Furan ee Su'aalaha la Weydiiyo --- Waa maxay astaanta qalabka korontada?
Inta badan qaybtu waxay qaataan astaan ​​caalami ah, sida Siemens Touch screen & PLC iwm, Panasonic servo motor, iyo Omron, Schneider iwm
Mashiinka Bacaha Af-furan ee Su'aalaha la Weydiiyo --- Waa maxay baahida korontada looga baahan yahay?
Mashiinka Bacda-Furan ee Su'aalaha la Weydiiyo --- Maxaa ku saabsan xirxirida rarka?
Mashiinka Boorsada-Furan Su'aalaha la Weydiiyo --- Yaa rakibaya qalabka?
Khadadka baakadka oo dhan sida bacda hadday dhacdo xirxirida, bacda xirxirida bacda, waxaan u diri doonaa farsamo yaqaan ka caawiya warshada macaamiisha, iibsaduhu wuxuu kaliya ubaahanyahay inuu bixiyo tikitka duulimaadka safarka, cuntada, kharashka qolka iyo gunada maalinlaha ah.
Mashiinka Bacda-Furan ee Su'aalaha la Weydiiyo --- Sidee ku saabsan adeegga iibka kadib?
Waxaan ku siin doonaa taageero dayactir ah arrin kasta oo la xiriirta qalabka, muddada dammaanadda waa 24 bilood. Haddii qalabku wali ku jiro dammaanad, waxaan beddeli doonnaa oo aan dayactiri doonnaa qaybaha cilladdu bilaash tahay oo iibsaduhu wuxuu u baahan doonaa oo keliya inuu bixiyo kharashka dhoofinta ama hawada. Guud ahaan, waxaan awoodnaa inaan rarno qaybta cilladaysan ee ku jirta kaydka 1 maalmood gudahood.
Foom Dheer oo Mashiinka Baakadka Khatimidii buuxi Su'aalaha la Weydiiyo --- Waa maxay isticmaalka mishiinkan?
Waxaa lagu qalabeyn karaa aalado kala duwan oo wax lagu buuxiyo oo loogu talagalay dareeraha, budada, badeecadaha kala geddisan, sida madaxyada miisaanka badan, Feejarka 'Auger', buuxiyaha dareeraha dareeraha, cabirka mashiinka wax lagu buuxiyo iyo aaladaha kale ee wax lagu buuxiyo.
Foom Dheer oo Mashiinka Baakadka Khatimidii buuxi Su'aalaha la Weydiiyo --- Goorma ayey tahay dhalmada ama waqtiga hoggaanka?
Waxay kuxirantahay amarkaaga, caadi ahaan waa 30 maalmood mishiinka caadiga ah.
Foom Dheer oo Mashiinka Baakadaha Khatimidii buuxi Su'aalaha la Weydiiyo - Bac noocee ah ayaa loogu talagalay mashiinka baakadka VFFS?
Boorsada barkinta, kiishka gusset, kiishka stabilo, boorsada quad quad.
Foom Dheer oo Mashiinka Baakadka Khatimidii Buuxi Su'aalaha la Weydiiyo --- Ma jirtaa tirada ugu yar ee lagu dalban karo amar?
Tirada ugu yar ee la dalbado waa 1 set
Foom Dheer oo Mashiinka Baakadka Khatimidii buuxi Su'aalaha la Weydiiyo --- Waa maxay cabbirka bacda ee mashiinku qaadan karo?
Waxaan ku siin karnaa mashiinka VFFS nooc kala duwan ee cabbirka boorsooyinka kala duwan, oo ay ku jiraan GVF-420, GF-520, GVF-720, GVF-1100.
Foom Dheer oo Mashiinka Baakadka Xidhmada Khatimidii Su'aalaha la Weydiiyo --- Waa maxay sumadda qaybta korontada?
Foom Dheer oo Mashiinka Xidhmada Khatimidii Mashiinka Su'aalaha la Weydiiyo --- Waa maxay qaabka bixinta?
Mashiinnada waxaa lagu soo diri karaa badda ama hawada, waxaan ku siin karnaa FOB, CNF, CIF ereyga iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha. Xajmiga weyn ee mashiinka sidamashiinka bacda lagu furo, waxaan doorbidi lahayn intaan bada soo mari lahayn.
Mashiinka Baakadaha Baakadaha ee horay loo sameeyay Su'aalaha la Weydiiyo --- Waa maxay isticmaalka mishiinkan?
Mashiinka Baakadaha Baakadaha ee horay loo sameeyay Su'aalaha la Weydiiyo --- Waa goorma keenista ama waqtiga hoggaanka?
Mashiinka Baakadaha Baakidhka ee horay loo sameeyay Su'aalaha la Weydiiyo --- Waa maxay cabirka bacda mishiinku qaadan karo?
Ballaca bacda waa inuu ka badnaadaa 80mm.
Mashiinka Baakadaha Baakada ee horay loo sameeyay Su'aalaha la Weydiiyo --- Waa maxay nooca baakadka bacda ee loogu talagalay mashiinka baakadaha kiishka ee horay loo sameeyay?
Boorsada jiifka ee horay loo sameeyay, Spout Doypack, Boorsada taagan, Boorsada Guesst, 4 dhinac shaabadaysan
Mashiinka Baakadaha Baakada ee horay loo sameeyay Su'aalaha la Weydiiyo --- Waa maxay sumadda qeybta korontada?